RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday dhaawaca mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan – Gool FM
Dajiye July 12, 2020
(Barcelona) 12 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday warbixin ku saabsan dhaawaca soo gaaray xiddiga reer France ee Antoine Griezmann, kaas oo ka dhigi kara in naadiga uu ka maqnaado inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
Antoine Griezmann ayaa ku soo bilaawday kulankii xalay ee Real Valladolid, balse wuxuu codsaday in la badalo inta u dhexeysay labada qeyb, sababa la xiriira inuu dareemay dhaawac soo gaaray, taasoo uu xaqiijiyay Quique Setién kaddib dhamaadkii ciyaarta.
War rasmi ah ay soo saartay kooxda Barcelona ayaa lagu xaqiijiyay in saakay oo Axad ah baaritaanadii caafimaad uu maray Antoine Griezmann ay muujiyeen in ciyaaryahanka reer France uu dhaawac ka soo gaaray muruqa lugta midig.
Warkan rasmiga ah ee ka soo baxay kooxda Barcelona ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay in Antoine Griezmann uusan diyaar u aheyn inuu qeyb ka noqdo kooxda waqtigan, iyadoo aan wali la shaacinin mudada uu garoomada ka maqnaan doono.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Barcelona ayaa kaga harsan horyaalka La Liga labo kulan oo kaliya kuwaas oo ay la ciyaari doonto kooxaha Osasuna iyo Deportivo Alavés sida ay u kala horeeyaan, waxayna si ku meel gaar ah 1 dhibic kaga hooseeyaan hoggaamiyaasha Real Madrid, laakiin haddii ay Los Blancos kulaneeda soo aadan ay guul gaarto farqiga wuxuu noqon doonaa 4 dhibcood.
"Lionel Messi wuxuu u baahan yahay nasiino" – Quique Setien